Maxaa sababay in dagaal uu ku dhexmary Jowhar Militeriga DFS & Ciidamda loo yaqaano Bancraf? | Maxaa sababay in dagaal uu ku dhexmary Jowhar Militeriga DFS & Ciidamda loo yaqaano Bancraf? | Hal Sheegaha La Hubo
Maxaa sababay in dagaal uu ku dhexmary Jowhar Militeriga DFS & Ciidamda loo yaqaano Bancraf?
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal duleedka degmada Jowhar ku dhexmaray Ciidamo ka wada tirsan Dowladda Federaalka
Dagaalkan ayaa fiidkii xalay ka dhacay degaanka Xaansholey ee ku yaalla Duleedka Magaalada Jowhar.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalka oo mudo daqiiqado ah socday uu si gaar ah uga dhacay degaanka Xaansholey oo ku yaalla inta u dhaxeysa Magaalada Jowhar iyo Garoonka Diyaradaha magaaladaasi.
Wariyaasha Jowhar ayaa soo sheegaya in is rasaaseyntan ay dhexmartay Ciidamo Millitari ah oo ku sii jeeday Garoonka Diyaaradaha iyo Ciidamo kale oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaano (Bancraft).
israsaaseynta dhexmartay Ciidamadan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii kala shaki uu soo kala dhexgalay labada Ciidan, iyada oo Ciidanka (Bancraft) todobaadkan gudihiisa ay tageen Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Iska hor imaadkan ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay, balse lama xaqiijin karin khasaaraha inta uu la egyahay, maadaama xilli habeen ah ay tahay.
Saraakiisha Caafimaadka ee magalada ayaa sheegay in Isbitaalka magaalada Jowhar la gaarsiiyay Laba Askari oo dhimasho ah iyo ku dhawaad Afar Askari oo dhaawac ah, kuwaasi oo isugu jira dhinacyadii dirirtu ay dhexmartay, waxaana hada xaaladooda lala tacaalayaa Askarta dhaawaca uu soo gaaray.
Ciidamo ka tirsan Booliska Hirshabeelle ayaa gaaray goobta uu iska hor imaadka ka dhacay, kuwaasi dejiyay xaalada, hada waxaa socda wada hadalo ay yeelanayaan saraakiisha labada Ciidan, waxayna ka hadlayaan waxa dhacay iyo sidii loo xalin lahaa.
Dadka ku sugan magaalada Jowhar ee ku jira baraha Internetka ayaa soo sheegaya in caawa ay marqura rasaas fara badan ka maqleen aagga Garoonka Diyaaradaha, ayna dareemeen cabsi, balse markii dambe ay ogaadeen in xaaladu ay tahay ciidamo iska hor imaad uu dhexmaray.